အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒေသအစားအစာ ငါးကောဟင်း
34 Responses to “ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒေသအစားအစာ ငါးကောဟင်း”
စားချင်စရာပါလား ချောရေ အခုနေ မိုးအေးအေးနဲ့ စားလိုက်ရရင်သိပ်ကောင်းမှာ။
oh yeah. delicious food :D
ကြည့်ရင်းနဲ့ သရေကျတယ်။ လုပ်စားဦးမယ်။ ကျေးဇူးပါချောရေ
တွေ့ပလား မှတ်ပလား PhyuT အဲဒါကြောင့်ပြောတာ ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) သွားရင် ခလေးတွေလို သရေခံလည်ပင်းစည်းအ၀တ်တခု အမြဲဆောင်ထားပါဆိုတာ အဟတ် အဟတ် ......မမချော လူဆိုး တရေကျပီး ကျန်တွားပီ:P :P
ငါးကောဟင်းအကြောင်း မှတ်သားသွားတယ် ချောရေ။
အဖန်ဓာတ်ရှိတဲ့ ရင်းရဲပင်ဆိုတာလည်း အခုမှကြားဘူးတယ်း) ငါးဘတ်မွှေကြော် ငါးခူစင်းကောလောက်ပဲသိတာ။ ကျေးဇူးနော်။
ပူပူစပ်စပ် ကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ဂွတ်မှာပဲ...ဒါပေမယ့် လုပ်ရမှာ တော့ပျင်းတယ်..
အအေးခံထားပြီး ခဲအောင် လုပ်။ ပြီးရင် လေယာဉ်နဲ့ ပို့ဗျာ... ဟီးဟီး
ရက်ရက်စက်စက်ပါလား မိသားစုနဲ့ဝေးနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ စည်းလုံးရေးဟင်းတခွက်က လွမ်းစရာပါကွယ်ရို့
တိုင်းလျန်ကို ရှမ်းနီလို့ ဘာသာပြန်လိုက်သပေါ့...:P.. မချောက ရှမ်းနီလား... ငါးကောဟင်းက စားလို့ကောင်းမယ့်ပုံပဲ..း))
အခု စစ နဲ့ တိုင်ပင်နေတာ စမ်းလုပ်စားကြည့်မယ် လို့
မီးကင် ရခက်လို့ ပြုတ်လိုက်ရင် တော့ မမွှေးတော့ဘူးထင်တယ်
ချောရေ... စားချင်စရာကြီး... ဗိုက်ဆာလိုက်တာ...း)
ငါးကိုကင်ဖို့ခက်ရင် မပြုတ်ဘဲနဲ့ အကောင်လိုက်ပေါင်းပြီးတော့မှ အသားနွာရင်လည်း ရလောက်တယ်နော်.
ပြုတ်တာထက်စာရင် ပေါင်းတာက ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ စမ်းလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ တကယ်
ငါးကိုကင်လိုက်တော့ မွှေးသွားတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ စပ်စပ်ကလေးဖျော်လိုက်တော့ ထမင်းအတော်မြိန်မယ်။ အရွက်ကြော်လေးတစ်ခွက်ထည့်လိုက်ရင် ကွက်တိ။ ဟိ ရွှလွတ်....း)
ဝေ့...... ချွေးမလေးက တောသားပဲ :P
အာလူး၊ ပိန်းဥ မထည့်လည်းရတယ်မှလား
ကိုယ်က ခန္တီးရှမ်းတွေကြားမှာ ကြီးပြင်းလာတာ
ဒါနဲ့ လျှာရှည်တာ မဟုတ်ဖူးနော်
မေးမလို့ ပင်စိမ်းက အဲ့ဒါလားဟင်
အဲ့ဒါက Sweet Basil လားလို့ပါ။ ဘိုင်ဝါလဖာ လို့ခေါ်
သလားလို့။ ကိုယ်တို့ သုံးနေကျ ပင်စိမ်းက တခြားအနံ့
နဲ့မို့လေ ရိုးတံ စိမ်းစိမ်းလေးလေ။ ကချင်မှာဆို မိုးတွင်းမှာ အရမ်းပေါက်တယ်လေ ဟုတ်လားဟင်??
ငါးကောဟင်းတော့ မကြားဖူးဘူး။ ငါးစင်းကောဘဲ ကြားဖူးတယ် :D
ချောရေ အဖန်ဓာတ်ရှိတဲ့ ရင်းရဲပင်ဆိုတာလေး ခုမှပဲ ကြားဖူးတယ်။ ချောတို့အိမ်နားမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့နာမည်က ဘယ်လိုများပါလိမ့်။ ငါးကောဟင်းစားဖူးအောင်လို့ တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ လာတည်းဦးမယ် ထင်တယ်။ ဟိ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ ချောရေ။
ဒီမှာက အဲဒီပင်စိမ်းဘဲရှိလို့ပါ။ အမှန်တော့ ကိုယ်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာသုံးတဲ့ အစိမ်းရောင်ပင်စိမ်းကို ပိုကြိုက်တယ်
သို့သော် အဲဒီပင်စိမ်း ဒီမှာ ရှာမရလို့ ဒီပင်စိမ်းညိုဘဲ သုံးနေရတယ်.. အနံ့နည်းနည်းနံ့တယ် သိပ်မကြိုက်
ဘုန်းဘုန်းတောက်နဲ့ မိုးယံကို ပါဆယ်ပို့လိုက်မယ်နော်.. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Love to eat your fish hinkaw.I will try it next week.Busy for the moment.Thanks for sharing traditional and local cuisine.
ဒါပေမဲ့ပိန်းဥသိပ်မကြိုက်ဘူး။ အာလူးနဲ့ ဘဲလုပ်မှထင်တယ်။ ချောကဘာနဲ့ ပိုကြိုက်လဲဟင်။ ကျေးဇူးပါချောရေ။ ကုိုယ်က ရှမ်းဟင်းတွေသိပ်ကြိုက်တယ်။
ပြုံးနေမယ့် မချော ဖေဖေ၊ မေမေကိုပါ မြင်ယောင်သွားတယ်။
ငါးကောဟင်းလည်းကြိုက်တယ်။ အစားအသောက်မှန်သမျှကြိုက်နေတာလား မသိပါဘူး။ :D
အားပါး... အလုပ်က ပြန်လာလို့ ကွန်ပြူတာ ဖွင့်လိုက်တိုင်း အစ်မကတော့ အစားအစာ တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးနဲ့ ဧည့်ခံနေတယ်။ သားရေတွေတောင် ကျလာပြီ... ရှလွတ်...
မုန့် တီဖတ်နဲ့ နယ်စားလိုက်ရရင် စားကောင်းမဲ့ ပုံဘဲနော် ကချင်မုန့် တီလို့ နာမည်ပေးလိုက်မယ်
အဲ့မှာလေ တစ်ခါ ကြေးနီမြစ်ဆိုလားဘာလားထောင်းထားတာစားဖူးတယ်.
မချော ငါးကောဟင်းနဲ့ ရှမ်းထမင်းချဉ် ဆိုတာ တူတူပဲလား . . ကျွန်တော် တောင်ကြီးမှာ စာဖူးတဲ့ ရှမ်းထမင်းချဉ်ကလည်း ငါးနဲ့ပဲ လုပ်ထားတယ်
ငါးကော ဟင်းလေးကို အခုမှ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးကြားဖူးတယ်.. စားဖူးရင် ပိုကောင်းမှာပဲနော်...
ငါးကောဟင်းလေးကြိုက်သွားပြီ... လုပ်စားဖြစ်ရင် မုန့်ဟင်းခါးဖတ်လေးနဲ့ပါ နယ်စားပစ်လိုက်မယ်....
ချိုနေမှာပဲ သောက်လိုက်၇င်း)
သူကြီးမင်းတို့ တုံးဖလားရွာမှာတော့ ဟင်းကောဆိုရင် ဟင်းရည်သောက် အရည်များများ အဖတ်နည်းနည်းရယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အကောမျိုးစုံ သောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါးကော ချိုးကော အဖူးအညွန့်ကော စုံလို့ပါဘဲ။
အမချောငါးကောက အဖတ်များတော့ ဟင်းရည်သောက် မဟုတ်ဘူးလား မသိဘူးးးးးးးးးးးးးးး။
အန်တီဦး၊ ကိုကိုမောင်>> ငါးကောက အရည်သောက်ဖြစ်ပါတယ်.။ အရည်ကျဲမှာစိုးလို့ အာလူးနဲ့ ငါးဖတ်များများထည့်တာမို့ ပျစ်နေတာပါ။
ပိုကောင်းအောင်လို့ ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်ထားတယ်း)
အတော်ပဲ ထမင်းစားရင်းနဲ့ ပို့စ်ဖတ်လိုက်မိတော့ ဟင်းကုန်သက်သာသွားရော...အင်း သူများသွားရည်ကျအောင် အတော်လုပ် ဒေါ်ချောရေ...၀ဋ်လည်မဗျား...
အရည်သောက်ဟင်းလား ပျစ်နေတော့ ရှမ်းငပိရည် ထင်သွားလို့း-)